Home > Articles >3Critical Points in Landing your DREAM Job
3 Critical Points in Landing your DREAM Job
အရင် PADC Myanmar Batch တစ်ခုမှာ တက်ဖူးတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်က “SG မှာ အလုပ်သွားရှာတဲ့အခါ Udacity က Android Nano Degree က အထောက်အကူ ဖြစ်မလား” လို့ လာမေးတယ် .. သူ့ကို အကြံပေးခဲ့တာလေးကိုပဲ ကျန်တဲ့ Android Developer တွေ … Company ကြီးတွေ First World Country တွေမှာ အတွေ့အကြုံသွားယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန် share ပေးချင်တယ် ..
Yes. အနည်းနဲ့ အများတော့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ deciding factor တော့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ..
Learning Platform တစ်ခုကို join တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိက တွန်းအားက ဒီ learning program က content တွေက ကိုယ့်ရဲ့ next step အတွက် အမှန်တကယ် အထောက်အကူဖြစ်လို့ ဆိုတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် .. (ဒီနေရာမှာ next step ဆိုတာကိုု emphasize လုုပ်ချင်ပါတယ် ..)
Udacity က Android Nano Degree က အထိုက်အသင့် အတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသား Android Developer တစ်ယောက်အတွက် Android Development ရဲ့ area ပေါင်းစုံကို ဘယ်လို မှန်မှန်ကန်ကန် ချဉ်းကပ်မယ်ဆိုတာတွေ ဘယ်လို နည်းစနစ်ကျကျ develop လုပ်ရမယ် ဆိုုတာတွေကို အဓိကထား ထိတွေ့ပေးတဲ့ learning program ဖြစ်ပါတယ် ..
ကိုယ့်ကို interview မဲ့ Senior က ကိုယ့်ကို ခန့်သင့်မခန့်သင့် ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ certificate တစ်ခုထပ် (Udacity က Nano Degree ဆိုတာလဲ online certificate တစ်ခုပါပဲ) အခြား မဖြစ်မနေ အရေးပါတဲ့ key point ၃ ခုရှိနေပါတယ် ..
နံပါတ် ၁)က ဒီ job vacancy post နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်အထိ relevant ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ .. Android Developer Post ချင်းအတူတူတောင် လက်ရှိ ၂ နှစ်လောက် production မှာ run ခေါ်တဲ့ post နဲ့ Agency တစ်ခုအနေနဲ့ Project တွေ အများကြီးကို ဟိုကူးဒီကူး လုပ်နေမဲ့ android developer အတွက် ခေါ်တဲ့ post နဲ့ အခုမှ စပြီး Startup တစ်ခုအနေနဲ့ build လုပ်မဲ့ App တစ်ခုကို develop လုပ်ပေးရမဲ့ post တွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေက သိသိသာသာ ကွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် ကိုယ်က Job Vacancy Post တစ်ခုကို ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ position ဘယ်လို ပုံစံ လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို တတ်နိုင်သမျှများများ သိနိုင်အောင် research လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် .. ဒီလိုအချက်မျိုးကို research လုုပ်တဲ့အခါမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်ကို ခန့်မဲ့ company ရဲ့ profile (website, linkedIn, lead လုပ်နေတဲ့ သူ(တွေ) ရဲ့ profile, etc) ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒုတိယအချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ portfolio project တွေပါ .. ကိုယ်က ဘယ် project တွေ မှာ ပါဝင်ဖူးတယ် .. ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ထိတွေ့ဖူးတယ် .. ဘယ်လို အပိုင်းတွေ ကျွမ်းကျင်တယ် ဆိုတာကို Resume မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားဖို့ လိုသလို ကိုယ်ပါဝင်ဖူးသမျှ App တွေ .. လုပ်ဖူးသမျှ side project တွေ အကုန်လုံးကိုလဲ ဖုန်းထဲမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သွင်းထား ဖို့ လိုပါမယ် ..
ပြီးရင် Interview မတိုင်ခင် တစ်ရက်လောက်မှာ App တွေကို တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်ပါဦး .. တော်ကြာပြခါနီးမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြလို့အဆင်မပြေတာ .. Crash တာမျိုးဆိုရင် ဘယ်ကောင်းမလဲ ..
နောက်ဆုံးအချက်နဲ့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ communication skills ပါပဲ .. professional တစ်ယောက် ကျွမ်းကျင်နေသင့်တဲ့ interpersonal skills တွေ အများကြီးရှိပါတယ် .. presentation skill, listening skills, public-speaking skills စတာတွေထဲက Great Job တစ်ခု land လုုပ်နိုုင်ဖို့အတွက်မှာ communication skill က တော်တော်လေးကို အခရာကျပါတယ် .. communication skill ကို ချုံ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြောချင်တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြေပြေပြစ်ပြစ် သူများနားလည်အောင် ပြောနိုင်တာ .. ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကိုသေသေချာချာ အာရုံစိုက်နားထောင်ပြီး နားမလည်မချင်း ပြန်မေးတာ လို့ ၂ ပိုင်း ခွဲနိုင်ပါမယ် ..
SG လို နေရာက အလုပ် interview မှာ ပြောတဲ့ အပိုင်းရော နားထောင်တဲ့ အပိုင်းရော ၂ ခုစလုံးက challenging ဖြစ်ပါတယ် .. ကိုယ်က Foregin Country တစ်ခုခုမှာ အချိန်ကာလ တစ်ခု နေဖူးတယ် ဆိုရင် ပြောတဲ့အပိုင်းက နည်းနည်းပို အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ အဲဒီလို မနေဖူးဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘာပြောမယ် ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို သေသေချာချာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ .. ချရေးကြည့်ဖို့ .. အနည်းဆုံး ၃ ခါလောက် စမ်းပြောကြည့်ဖို့ လိုပါမယ် .. အထူးသဖြင့် ကိုယ့် နောက်ဆုံးအလုပ်က experience ကို ရှင်းပြတာမျိုး .. ကိုယ်ဘာကြောင့် သူတို့ company မှာ အလုပ်လျောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း .. ကိုယ့် အတွေ့အကြုံတွေ skill တွေက ဘာလို့ သူတို့ company နဲ့ သင့်တော်ကြောင်းရှင်းပြတဲ့ အပိုင်းတွေပါ .. ဒါတွေက ကြိုလေ့ကျင့်ထားနိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေပါ .. အနည်းဆုံး ၃ ခေါက်လောက် လေ့ကျင့်ဖို့ လိုပါမယ် ..
ကိုယ်က အခုမှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် Foreign အလုပ် လျောက်တာ ဆိုရင် အရမ်း စိတ်မလောမိအောင် စိတ်မလှုပ်ရှားမိအောင် စကားကို တအားကြီးအမြန် မပြောမိဖို့ အပိုင်းတွေကိုပါ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါမယ် .. ဥပမာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တအား စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်း သတိထားမိပြီဆိုရင် အသက်ပြင်းပြင်း ရှည်ရှည် တချက် ရှုုပြီး စိတ်ကို လျော့ကြည့်တာမျိုးပါ .. ကိုယ်က ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ သင့်တော်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ..
နားထောင်မဲ့ အပိုင်းမှာ ဖြစ်မဲ့ အဓိက Challenge ကတော့ လေယူလေသိမ်းပါ .. ကိုယ်က အခုမှ Foreign ရောက်တာဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တာက ကိုယ် English စကားကို ကောင်းကောင်းနားထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ လူမျိုးတစ်ခုစီအလိုက်ရှိတဲ့ English စကားပြော accent အပိုင်းကို သိပ် capture မလုပ်မိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ပြောချင်တာက တရုတ်လူမျိုးက ပြောတဲ့ English စကားပြောပုံစံနဲ့ ကုလားလူမျိုးက ပြောတဲ့ English စကားပြောပုံစံ က လေယူလေသိမ်း တော်တော်လေး ကွဲပါတယ် .. SG လိုနေရာမျိုးကျတော့လဲ တရုတ်တွေရော ကုလားတွေရော အကုန် စုနေကြတာဆိုတော့ “သူဘာပြောချင်တာလဲ” ဆိုတာကို သေချာနားထောင်ဖို့နဲ့ ကိုယ်နားလည်လိုက်တာက မှန်မမှန်ကို ပြန် confirm လုပ်ဖို့ အချက်ဟာ အခုမှ Foreign Job ကို စလျောက်မဲ့ လူတွေအတွက် တော်တော်ကြီးကို အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါပဲ..
သူပြောသွားသမျှကို ကိုယ်က ဒီက အကျင့်ဆိုးကြီးပါပြီး နားလည်လည် မလည်လည် (အားနာပါးနာနဲ့) ခေါင်းတွေငြိမ့် .. ပြီးတော့ သူပြန်မေးတော့မှ ရှေ့မှာ တောက်လျောက်ပြောသွားတာတွေကို သေချာနားမလည်တော့ ဘာကို ဘယ်လို ဖြေရမယ်မှန်းမသိ .. English စကားပြောကလဲ အခုမှ လက်တွေ့စပြောမှာဆိုတော့ ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ နိုင် ဆိုရင် .. ကိုယ့်ရဲ့ ဒီအလုပ်ကို ရနိုင်မဲ့ chance ကို အနည်းနဲ့ အများ ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် ..
ဟုတ်ပါတယ် .. ဒီ အချက် ၃ ချက်
၁) Job Position အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ relevancy
၂) ကိုယ့်ရဲ့ Portfolio Project တွေ
၃) ကိုယ့်ရဲ့ Communication Skills
တို့က အမှန်တကယ် ကိုုယ် ဒီအလုပ်ကို ရနိုင်မရနိင် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမဲ့ key point တွေပါပဲ ..
ဒီအချက် ၃ ချက်သာ သိသိသာသာ ချို့ယွင်းမယ်ဆိုရင် Nano Degree မကလို့ UK က Computer Science ဒီဂရီ ရထားလဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အလုပ်ရဖို့ chance တအားနည်းနေမှာဖြစ်ပါတယ် ..
အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူတိုင်း ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတစ်ခု ရကြစမြဲပါ ..
ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ကြိုုတင်ပြင်ဆင်ပြီး အလုပ်နေရာကောင်းမှာ ထိုက်တန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့အခါ ဒီနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိသိသာသာ တွန်းအားပေးထောက်ပံ့ နိုင်မဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတွေ ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည့်မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ ဒီစာပုဒ်လေးကို အချိန်လု ချရေးလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
Best of Luck for your Next Opportunity!